Chili: Manomboka any Californie hatrany Chili eny ambony “biodiesel” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Jolay 2010 10:00 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, Italiano, বাংলা, 繁體中文, 简体中文, English
Olona roa teratany Siliana, Carlos Herrera – Mpiara-miasa amin’ny tale mpanatanteraka ao amin'ny Education Without Borders International – sy Maria Jose Calderon – mpanao horonantsary fanadihadiana nahazo mari-pankasitrahana sady mpanao gazety – no niaraka nitety tany lavitra nandritry ny 6 volana niainga tany Californie hatrany Chili, tamin'ny El Chaski, fiara “4×4 Chevy Suburban 6,5L Turbo Diesel tamin'ny 1995, izay namboarina handeha amin'ny “Angovon-java-maniry voaodina (WVO)” , sy “Angovon-java-maniry ranoray (SVO)” ary biodiesel sy ny diesel mahazatra”.
Tanjona telo no hotratrarina amin'ny tetik'asa ambadik'ity dia ity:
Nanao fanadihadiana sy nizara ny zava-niainany i Carlos sy Maria Jose tamin’ny alalan’ny horonantsary, saripika ary fanoratana blaogy tao amin’ny fizaràna antsoina hoe “Diary” ao amin'ilay vohikala. Manazava ny mombamomba io diary io ny pejy fandraisana ao amin'ilay blaogy:
Nomarihan-dry zareo tamin'ny alalan'ny Sarin-tany Google ny dia nataony mba ahafahan'ireo mpamaky mahita marina hoe aiza izao no misy azy ireo. Nanomboka tamin’ny 17 novambra 2009 ny dia ary iray volana latsaka taorian’izay, tamin’ny 11 desambra, dia efa nahavita 2.909 miles (4.681 kilometatra) sahady ry zareo. Tamin’io andro io indrindra dia nanoratra izy ireo:
Na dia tamin'ny 4 Jona 2010 aza ry zareo no tonga tao Chili, tamin'ny 6 Aprily kosa ny lahatsoratra farany tao amin'ny blaogy. Niaraka tamin'ny 9.832 miles (15.823 kilometatra), nanoratra i Carlos:
Ampahany iray lehibe amin'ity tetik'asa ity ny sehatra fanabeazana. Ao amina fizarana manokana antsoina hoe “Fanabeazana”, dia afaka mijery horonantsary sy fanazavàna ireo ray aman-dreny sy mpanabe mba hampianarana ireo ankizy momba ny tontolo iainana sy i Amerika Atsimo. Manazava i Maria Jose sy Carlos fa fanandramana ny fampiasàna “fitaovana azo entina” eo amin'ny sehatra fanabeazana koa io tetik’asa io:
Tsy vitan'ny hoe manome votoantin-kevitra mifono fanabeazana feno ampiasaina any an-tsekoly izahay, fa mamantatra ny zava-bitan’ny “fitaovana azo entina” eo amin’ny sehatry ny fampianarana koa. Amin'ny alalan'ireo finday vatsian'i Nokia sy ny Fikambanana Pearson no isarihanay ireo tanora manerana an'i Amerika Atsimo mba ahafahanay mamantatra ny hevitr’izy ireo amin'ireo olana ara-tontolo iainana sy ny maro hafa koa. Jereo ny Kilasy “Mobile”-nay ahafantaranao izay lazain'ny tanora.
Ny ankamaroan’io fitaovanam-pampianarana io dia avy amina fizaràna ho an'ny firenena tsirairay izay notsidihan’izy roa nandritry ny diany. Mbola eo an-dàlam-pandrosoana ireo tranonkala isam-pirenena ireo – toy ny ambin'ilay vohikala, izay miha-mitombo noho izy ireo manampy lahatsoratra sy fanampim-baovao – fa izy rehetra dia hitàna ireo tranga lehibe any amin'ilay firenena, ary ny sasany amin'ireo vohikala dia efa manana horonatsary mirakitra ireo fepetra raisin'ny mponina hiarovana ny tontolo iainana. Ny famaritana ity fizarana ity dia azo raisina ho fanolorana tsara ilay tetik’asa manontolo sy ny vokatra antenaina ho azo: